" /> ग्लोबल न्यूज – Page7– News Of Global
काठमाडौं । उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उन जीवित छन् या छैनन् ? अहिले विश्वभरका मानिसहरु यो प्रश्नको विश्वसनीय जवाफ खोजिरहेका छन् । व्यापक सञ्जाल भएका प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुले ‘एस’ र ‘नो’ मा जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् । चारै ध्रुवका अन्तरकुन्तर सूचनाहरु राख्ने शक्तिशाली देशका खुफिया एजेन्सीहरुले पनि यथार्थ पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । […]
एजेन्सी । कोरोना भाइरस चीनको वुहानबाट सुरु भएर यतिबेला विश्वभर फैलिएको छ । कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी मानिसहरु अमेरिकाले गुमाउन पुगेको अवस्था छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ भाइरस नामसमेत दिएका थिए । तर यतिबेला भने चीनले नियतवश कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलाएको आरोप लगाउँदै अमेरिकाको मिसौरी राज्यले चीनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ […]
एनआरएनए मलेसियाद्वारा नेपाली कामदारलाई निःशुल्क खाद्यान्न सहयोग
मलेसिया । मलेसियामा रहेका समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकलाई निःशुल्क सहयोग गरिएको छ । मलाया खवरद्वारा सञ्चालित अभियान अन्तर्गत यस बिपतको घडीमा कुनैपनी नेपाली खाद्यान्न अभाव भइ भोकभोकै नपरुन भन्ने उदेश्यले एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई समस्या पर्दा सहयोग गर्ने अभियानमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मलेसियाले पनि साथ दिने भएको छ । एनआरएनए मलेसियाले एनसीसी मलेसियाका केन्द्रीय […]
पोर्न स्टार लोला टेलरको अनौठो घोषणा, भ्याक्सिन बनाउने डाक्टरसँग रात बिताउन तयार
एजेन्सी । चीनको वुहान सहरबाट उत्पन्न भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले विश्वभर नै महामारीको रुपमा त्रसित बनाइरहेको बेला रसियन पोर्न स्टारले अनौठो घोषणा गरेकी छन् । कोरोना भाइरसले ५० हजारभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ। लाखौं संक्रमित भएका छन्। कोरोना फैलनबाट रोक्न धेरै देशमा लकडाउन गरिएको छ। सबै देश यो संक्रमणबाट बाँच्ने भ्याक्सिनको खोजीमा जुटेका छन् तर […]
पर्वतका हरिप्रसाद शर्मा ७ वर्षदेखि सम्पर्कविहीन
मलेसिया । पकुवा– ९ पर्बतका हरिप्रसाद शर्मा ७ वर्षदेखि मलेसियामा बेपत्ता छन् । ७ बर्स पहिला मलेसियाको 1-2-2 jalan 3/50 diamond square business center of jalan combak 5300 kuala lumpur मा सुरक्षागार्डको रुपमा काम गर्दै आएका शर्मा हालसम्म पनि सम्पर्कमा नआएको परिवारले जनाएका छन् । अहिलेसम्म सम्पर्क नभएपछि परिवारका सदस्य उनको खोजीकार्य गरिदिन विभिन्न निकायमा […]
अमेरिकालाई स्वास्थ्य सामग्री लिएर उड्यो रुसी जहाज
मस्को । रसियन सैन्य जहाज मेडिकल उपकरण तथा मास्क सहित अमेरिकाका लागि उडेको छ । बुधबार सैन्य ढुवानी जहाज अमेरिकी सहायताका लागि उडेको रसियन टेलिभिजनले जनाएको हो । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यसअघि नै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई टेलिफोन गर्दै सहयोग गर्ने बताएका थिए । सोमबार पुटिन र ट्रम्प टेलिफोनमा कुरा गर्दै कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध […]
कोरोनालाई ‘चाइनिज भाइरस’ भन्दै आएका ट्रमको बोली फेरियो
काठमाडौं । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रमले ‘चाइजिन भाइरस’ भन्दै आएका थिए । तर कोरोनाको महामारीले विश्व नै आतंकित बनाएपछि यतिबेला उनको बोलि फेरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । अमेरिकी समयअनुसार बिहीबार बेलुका भएको फोन वार्तामा राष्ट्रपति […]
के हो ट्वीटरमा ट्रेन्डिङ भइरहेको ‘हान्ताभाइरस’ ?
चीनमा एक व्यक्तिको मृत्यु भएपछि यतिबेला समाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ‘हान्ताभाइरस’ ट्रेन्डिङमा छ । ग्लोबल टाइम्सका अनुसार चार्टड बसमा शान्डोङ प्रान्त फर्किरहेका एक व्यक्तिमा यस भाइरसको संक्रमण भएपछि मृत्यु भएको हो । यस समाचारमा ‘भाइरस’ शब्द हुनु र यो ‘चीन’ सँग जोडिनुले मानिसहरु फेरि नयाँ भाइरस आएको र यो कोभिड–१९ जस्तै विश्वभर महामारी बन्ने हो कि […]
<<- Page 1 … Page6Page7Page 8 ->>